The three new amigos - Page 2 - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Miskiin-Macruuf-Aqiyaar, September 9 in Politics
Marwalba nin uu soo qortay madaxwaune Villa Somalia aan maamulin, dadkii Soomaaliyeedna Ethopian (Qalbi Dhagax) udhiibay hadana kusheegay argagaxiso waa ka fiicanyihiin. Meesha wax Lafta Gareen iyo Qoor Qoor kaliita majirto.
Arinta qalbi dhagax
Farmaajo macno wayn bay u samaynaysaa sida dadka qaarkii nabarka uga dhigayaan ma'ahan.
Sidee farmaajo oo madaxweyne ah muwaadin soomaaliyeed Ethiopia loogu dhiibay? Waa su'aal aan marnaba duugoobayn.
Aragtidayda waa sumucad wanaagsan, qaybna ka qaadan karta mustaqbalkiisa hogaamineed.
Waxaa lawada ognahay in dad badan oo rag iyo dumar isugu jira ayagoo qaawan tigreega loogu dhiibay Garoowe iyo qaybta waqooyi gaal kacyo, raq iyo ruuxna ilaa maanta laga hayn meel la geeyay wax badana ka qiimo badnaa qalbi dhagax.
Waligiin reer caano qaste waxaan amaan ahayn miyaad ka maqasheen iyo walaalkeen faroole iyo faro-nuug?
Adeer farmaajo lagama qaateen muwaadin haduusan dal fowda ah xukumin, oo waliba cadawgiisu walaalkaa yahay.
Sadexda maamul goboleed maskaxdooda shisheeye kuma adeegto waa niman xor ah oo garanaya farmaajo ama ha tago ama ha joogo inay dalka leeyihiin waana daahiro fiican oo baryahan dambe soo baxday
Khayrka allaha na waafajiyo.
Labaatan iyo shan sano ka badan ayee ka dhiibaayeen halyeydii JWXO gobollada Waqooyi Bari, Waqooyi Galbeed iyo gobollada dhexe.
Isla kuwaas u sacabtumaaye kuwa dhiibaaye ayaa arrinta Qalbidhagax noo buun buuninaayo.
What is Qoorqoor doing in Nairobi?
Mawduucu ma aha wax Reer hebel iyo maamul reer hebel dhiibi jiray. Mawduucu wuxuu taaganyahay madaxwayne dadka caqliga yar isaga gadaya inuu yahay muwaadin laakiin ficilkiisu uusan saas muujinayn. Qalbi Dhagax wuxuu udhiibay inuu ku raali galiyo Amxaaro si ugaga hiiliyaan Soomalida kale ee isaga ku kacsan. Waa dulinimo meesha ugu xun uu nin Madaxwayne Soomaaliyeed sheeganaya uu sameeyo waxa taageersana waa wax kaliita.
Madaxwayne Deni iyo Sayid Ahmed Madoobe waaka muwaadinsanyihiin Farmaajo, maxaa yeelay waxay ku haystaan sharciga uu rabo inuu jeebka kurito. Waxay doonayaan wadanka sharciga inuu shaqeeyo si aanan mardambe udhicin in nin xukun madax maray sidii Siyaad Bare inuu wadankaan u horseedo burbur iyo dagaal sokeeye. Marka barta ninka dantiina kashaqqenaya iyo kan dantiisa gaarka ka shaqeeynaya.
Qabyaadu waxay ku gaarsiisay inaad difaacdo muwaadin Soomaaliyeed oo gaal xun oo Amxaar ah laga gatay? Oo waliba cay loogu daray iyo inay ONLF tahay argagixiso. Tanke maxaad cadayn u haysaa inta qof oo Puntland dhiibtay? Bal noo sheeg. Ogaantay labo jeer oo ahayd wakhtigii Faroole ma ahee ma maqal reer Puntland dad ay dhiibeen. Taasna cid sidaada oo kale difaacaysa oo reer Puntland ah ma arag.
Walaal gacaliye ha iska dhigin nin duurka Amazon ku nool, mowduuca qalbi dhagax buugiisa ha la laaba, inta goori-goor tahay.
Qalbi dhagax wuxuu xirnaa in yar oo kooban si kastaba haku dhaco xarigiisu.
Asagoo labisan oo soomaalida ugu caansan yuu xabsiga kasoo baxay.
Sumacadaasna waxaa siiyay farmaajo oo aysan ahayn dal uu xukumo in muwaadin soomaaliyeed shisheeye ka qaato.
Is waydii su'aashaan....
(Maxaa looga waayay qof caan noqda sida qalbi-dgagax, dadkii boqolaalka ahaa oo siyaasiyiinta reer tolkaa dhoofiyeen?
Dadkaas la dhiibay waxaa ugu badnaa cid dhiibta siyaasiyiinta puntland waxaana ugu dambeeyay cid dhiibta siyaasiyiinta reer gurceel.
Maantana waa labada siyaasi oo sida gaarka ah ugu ooya qalbi-dhagax meel walboo lagu shiro faataxada ka hor magiciisa soo qaata.
Intaas waxaa dheer beeshii uu ka dhashay qalbi dhagax oo markay arkaanba ilmadu soo dhaafayso sidii inaan waligood wiil dheer ka dhiman.
Qabiilayste ma ahi saaxiib qabiil waan aqaan wuxuu galo iyo wuxuu gudo labadaba.
Deni iyo madoobe farmaajo yaa tol is jecel ka dhigay ha moodin inay isku reer yihiin, qabiilku waa basal qayba mar harto.
Hadaad doonto waxaad dhahdaa odaygii carabka ahaa inta garoowe degan kaliya buu dhalay, kuwa kale waa nalagusoo dhex tuuray.